I-Web Scraper Link Selection echazwe ngu-Semalt
Ukwahlula Iinkcukacha ezahlukeneyo kwiWebhu
Ngamhla ixesha lewebhu livula iphepha elitsha kwi-Intanethi, abasebenzisi kufuneka bakhiphe into ethile. Emva kokudala isicwangciso, abasebenzisi kufuneka bakhulise abakhethi. Ziyimihlaba kwiziko elijoliswe kuyo eliqulethe idatha ethile. Abasebenzisi bangongeza, bahlele okanye basuse abakhethiweyo ngokusebenzisa ipaneli. Abasebenzisi bangasebenzisa esi sixhobo sokuqhawula ukuqokelela iintlobo ezahlukeneyo zolwazi, njengomxholo, iitheyibhile, imifanekiso, iinombolo zefowuni, amanani kunye nokunye. Emva kokuqokelela ulwazi abayidingayo, abasebenzisi banokukopisha iziphumo njenge-TSV kwi-Clipboard kwaye bagcine kwiifolda, okanye ukuthumela iziphumo kwi-Google Docs njenge-Excel Spreadsheet.
Ukuhamba ngeeNqanaba ezininzi
Ngokusebenzisa esi sixhobo sokucoca, abaphandi bewebhu bangakwazi ukuhamba phakathi kweendidi ezahlukeneyo kunye namacandelwana kwaye ngokukhawuleza ukhethe izicatshulwa zekhonkco. Ngokomzekelo, banokukhetha abakhethi bababini bekhonkco: enye yeeklasi eziphambili kunye nezinye kwiingingqi. Ngale ndlela kunokwenzeka ukuhamba ngephepha lewebhu ezahlukeneyo kwaye ukhiphe ii-URL.
Indlela yokusingatha umongo
Namhlanje amaninzi evenkile kunye nabathengisi banamaqela amaninzi kwiiwebhusayithi zabo. Abasebenzisi kufuneka banqume ukuba yeyiphi inqanaba abafuna ukuyisebenzisa. Iqela ngalinye linalo uluhlu lwazo lweemveliso kunye kunye neentlanga eziqhagamshelweyo. Ngaphezu koko, abasebenzisi kufuneka bakhumbule ukuba kukho amaphepha athile avela kumaphepheni kwaye akuveli kwiqela elithile. Bamele baqale ngokudala i-sitemap (icebo) kwaye baqale ukukhipha izinto. Ukuze benze njalo, kufuneka benze enye Ikhonkco yeChansela ekukhetheni ikhonkco. Abasebenzisi kufuneka bakhumbule ukuba xa i-web scraper ivula iqela elithile, liyakubutha kuphela izinto ezivela kweli phepha elithile. Emva koko, unokusebenzisa iindlela ezahlukeneyo zobuhedeni. Ezi nxu lumano zingakwazi ukufumana iinkcukacha ezinxulumene nolunye, kunye neengqungquthela ezingaphezulu kweefayile zabasebenzisi.
Esi sixhobo sokukhupha sinempawu ebalulekileyo, kwaye sinokukunceda abaphandi bewebhu ukuba baqoke iziphumo abazifunayo, bahlalutye kamva. Isixhobo esilula esingafuni ukubhalwa kwekhowudi kunye nabasebenzisi akudingeki ukuba babe nezakhono eziphambili zeprogram zekhompyutha. Yona yeyona ncwadana engcono kakhulu ye-web ukususa isandiso se-Chrome kubantu abangenayo iprogram abafuna ukukhipha idatha kwiwebhusayithi ngaphandle kokuqesha i-web scraper professional. Bamele basebenzise isiphequluli se-Google Chrome ukuyifaka Source .